+++++ให้เช่า คอนโดใหม่2bedsกว้างอยู่สบาย เมโทรพาร์ค สาทร มี TV, Microwave ,ตู้เย็น เตาไฟฟ้า เเละที่ดูดควั | DDHomeLand
หน้าแรก » ภาคกลาง » กรุงเทพ » สาทร
โดย Sara ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ4พ.ย. 2555.
+++++ให้เช่า คอนโดใหม่2bedsกว้างอยู่สบาย เมโทรพาร์ค สาทร มี TV, Microwave ,ตู้เย็น เตาไฟฟ้า เเละที่ดูดควัน เครื่องทำน้ำอุ่น เเอร์3เครื่อง จอดรถฟรี2คัน ราคาพิเศษ 12,500 Bath/M เป็นส่วนตัว++++ห้องสวย ทำเลดี(มีจำกัด)
ห่างจาก BTS กรุงธนบุรี ประมาณ 3.5 กม.
มีบริการรถ shuttle bus ในโครงการส่งถึงสถานีวงเวียนใหญ่ ราคาคนละ 20 บาท ตั้งแต่6โมงเช้าถึง4ทุ่มทุกวัน
ขนาดห้อง 56 ตรม. ห้องนอนแยก2ห้อง
ระเบียงด้านนอ เป็นวิวโล่ง ไม่มีตึกบัง
ราคาค่าเช่า 12,500 บาทต่อเดือน รวมค่าส่วนกลางแล้ว
Nearest BTS (if applicable): KungThonburi
สนใจติดต่อ 086-90607-07, 082-64141-99 Winz
*** โฆษณา by Google *** หาห้องเช่าอยู่ Click ศูนย์รวมรับฝาก ให้เช่า หาห้องเช่า ขาย คอนโด บ้านเเละที่ดิน ที่ดีที่สุดย่านฝั่งธน www.readycondos.com
ติดต่อ: Sara อีเมล์:
ต้องการ: เช่า ราคา: 12,500/เดือน
โทรศัพย์: 0863211183,0863211183 จังหวัด: กรุงเทพ
คำค้น: ကဖင်​လင်​​အောကား | ရန်ကုန်အောကား | အပျို ကြီး​စောက်​ဖုတ်​ | အပျို​လေး​စောက်​ပက်​ | အပျို​ပေါမ​လေးများ | မြန်​မာမိန်းက​လေးလိုးကား | မြန်မာBlueBopk | အပျို​ချောမ​လေး | အရီ​လေး%20လိုး | အပျို​လေး |
ဖိုမဆက်​ဆံ​ရေး ဖိုမဆက်​ဆံ​ရေး အောကားများ မြန်မာစာတန်းထိုး ဖိုမဆက်​ဆံ​ရေး မြန်မာ အပြာကာတွန်းစာအုပ် မိုးဟေကိုဖူးကာ ဖိုမဆက်​ဆံ​ရေး တရုတ်​ ​စောက်​ဖုတ်​ လှလှ​လေးများ လိုးphot မြန်မာအပြာစာအုပ် ရုပ်ပြ ဒေါက်တာချက်ကြီး အောphotoes ဖိုမဆက်​ဆံ​ရေး ဖိုမဆက်​ဆံ​ရေး အောကားများ မြန်မာစာတန်းထိုး မြန်မာ အပြာကာတွန်းစာအုပ် မိုးဟေကိုဖူးကာ หอพักหญิง ในเมืองเชียงใหม่ ဒေါက်တာချက်ကြီး dr.chatgyiမြန်မာဇာတ်လမ်း y လီးပုံများ x အပြာစာအုပ်များ အော်ကား အသစ် ဒေါက်တာချက်ကြီး အောစာအုပ် မြန်​မာ​အေားကားများ ဖာမ အောကာ বাতিজি কে চুদার গলপ ဒေါက်တာချက်ကြီး หอพักหญิง ในเมืองเชียงใหม่ ဒေါက်တာချက်ကြီး dr.chatgyiမြန်မာဇာတ်လမ်း y လီးပုံများ x အပြာစာအုပ်များ အော်ကား အသစ် ဒေါက်တာချက်ကြီး အောစာအုပ် မြန်​မာ​အေားကားများ ဖာမ အောကာ বাতিজি কে চুদার গলপ ဒေါက်တာချက်ကြီး မြန်​မါ်​အောကား နီနီ​မော်​ရမက်​ video မြန်မားအေားကာ လိုးချင်တယ် မေမေ
process: 0.0098 sec. :: memory: 1.37 MB